कोभिड १९ तथ्यांक अपडेट ७ र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्संग छलफल
Posted On:May 31,2020
• कोरोना भाइरसबाट विश्वभर १ सय २८ नेपालीको मृत्यु,
• विदेशमा १२१ , नेपालमा ७, विश्वभर १५ हजार ८ सय २६ जना नेपालीमा संक्रमण
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण शनिवार (३० मे २०२०) साँझसम्म नेपाल बाहिर मृत्यु हुने नेपालीहरुको संख्या १ सय २१ पुगेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता थप ७ जना नेपालीहरुले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् । संघका अनुसार युएईमा १ जना, युकेमा १ जना १, अमेरिकामा १ जना, बहराइनमा २ जना, कुवेतमा १ जना र साउदी अरबमा १ जना नेपालीको यो साता ज्यान गएको हो ।
समितिका अनुसार कतार, अमेरिका, युएई, युके, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, मलेसिया, टर्की, डेनमार्क, प्रोतुगल, क्यानाडा, आयरल्याण्ड, माल्दिभ्स्, स्पेन, अष्ट्रेलिया, जापान, बेल्जिमय, स्वीड्रल्याण्ड, फिनल्याण्ड, जर्मनी, साईप्रस, न्यूजील्याण्ड, हङ्गकंङ्ग, भारत, माल्टा, पोल्याण्ड, रुस, फ्रान्स, म्यानमार, रोमानिया, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड लगायतका ३४ देशका नेपालीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
संक्रमितमध्ये ४ हजार ५ सय भन्दा बढी नेपालीहरु कोरोना भाइरसबाट मुक्त भएको बताएको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । यो साता डेनमार्क र टर्कीमा नेपालीमा नयाँ संक्रमण देखिएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले सहजीकरण गर्ने
सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णयको गरेकोमा संघले स्वागत गरेको र यसमा संघले सघाउने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्र्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल फर्काउन गैरआवासीय नेपाली संघ सहजीकरणका लागि तत्पर रहेको बताउनुभएको छ ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघले शनिवार राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुसँग छुट्टै छलफल गरेको छ । विश्वभर छरिएका ८० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु भएका मुलुकमा कोभिड भाइरसले पारेको प्रभाव, राहत र उद्धारको बारेमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग छलफल गरिएको संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिनुभयो । छलफल मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिकहरुको समस्याको बारेमा केन्द्रीत भएको संघले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय समिति ,
नोटः एनआरएनए स्वास्थ्य समितिले दिएको तथ्यांकको बारेमा थप जानकारी चाहिएमा समितिका संयोजक डा. संजिव सापकोटलाई ००१६७ ८५५७ ८३८९ (भाइवर) मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ ।
"विदेशबाट नेपाली फर्काउने सरकारको निर्णयको गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा स्वागत"